घरमै बसेर यसरी चम्काउनुहोस् अनुहार – Dainik Samchar
March 17, 2021 412
तर कतिपय यस्ता सामाग्री र प्रयोगहरुले पनि मानिसका छालामा प्रतिकुल असर पर्ने गरेका छन् । तर साइड इफेक्ट नहुने गरि घरमै पनि सौन्दर्यका विभिन्न तरिकाहरु अपनाउन सकिन्छ । जसले अनुहार चमकाउन मद्दत गर्छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
Prevश्रीमानको मृत्युपछि काजकिरियामा बसेकी नर्सले मलिन स्वरमा भनिन् – दाजु मैले मेरो छोरालाई के उत्तर दिने ?
Nextतपाईको हत्केलामा यस्तो चिन्ह छ ? यस्ता व्यक्ति हुन्छन् निकै भाग्यमानी
राजेश पायल राइ ले बालेन शाह लाई भेटेर एस्तो भने